Sakari Ismaaciil oo bixiyay xog lagu soo qaba karo Samantha Lewthwaite – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sakariye Ismaail Xersi oo dhawaan si rasmi ah u shaaciyay inuu ka tanaasulay fikirkii shabaab ayaa u sheegay dad baarayaal ah in haweeneyda loogu doon doonista badan yahay ee Samantha Lewthwaite ay ku sugan tahay deegaan Ras Kiyamboni oo u dhow xadka Kenya uu kala wadaago Soomaaliya.
Saraakiil sare oo dhanka baaritaanada qaabilsan ayaa sheegaya in Ciidamo gaar ah loo tababarayo xeeladii ay ku soo qaban lahaayeen hooyada afar caruuur oo dunida ay baadi goob ugu jirto.
Wuxuu sheegay Sakariye in 3o-jirta ay tahay Sarkaal muhiim ah oo xiriir la leh Al-Qaa’ida,islamarkaana ay ilaalinayaan ciidamo gaar ah oo ka tirsan ururka Al-shabaab.
Sida lagu qoray Wargeyska the Mirror xogta uu bixiyay Sakariye Ismaaciil oo horay shabaab dhanka sirdoonka ugu qaabilsan dhawaan uu shaaciyay inuu ka baxay ayaa Baarayaasha xogtaan helay ayaa ku tilmaamay inay muhiim u yahay,islamarkaana ay horseedeyso in lagu soo qabto Samantha Lewthwaite.
Hadii dhacdo inay rumowdo warbixintaan ayaa sidoo kale ilow ku dhow Baarayaasha waxay sheegayaan.
Isha laga soo xigtay warkaan ayaa sheegeysa in warbixinta ku aadan halka haweeneydaan ku sugan tahay ay tahay mid sax.
Samantha Lewthwaite ayaa ku eedeysan inay ka danbeysay weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate Mall oo ku taalo magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. – See more at: http://risaala.net/articles/24466/Sakari-Ismaaciil-oo-bixiyay-xog-lagu-soo-qaba-karo-Samantha-Lewthwaite#sthash.itMpAMcr.dpuf